राति ११ बजे सईले उठाएर लगेका ढुंगानाको बिहान मृत्यु, तिहारको बेला घरमा रुवाबासी!
कार्तिक २१, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- प्रहरी हिरासतमै एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ५२ वर्षीय रवीन्द्रकुमार ढुंगाना रहेको बुझिएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सोमबार बिहान ढुंगानालाई वीर अस्पताल पुर्‍याएर परिवारलाई खबर गरिएको थियो। उपचारको क्रममा ढुंगानाको अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो।
प्रहरीका अनुसार ढुंगाना छारे रोगका बिरामी रहेका थिए। चेक बाउन्स मुद्दामा बालाजु वृत्तले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउपछि ढुंगानालाई प्रहरी परिसर टेकु लगी स्वास्थ्य परीक्षण गराएर थुनामा राखेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ।
परिवार श्रोतका अनुसार ढुंगानालाई आइतबार राति सई सुरेन्द्र कार्कीले मोटरसाइकलमा लिएर गएका थिए। भार्इलाई लिएर गएकै दिन राति ११ बजे सई कार्कीले बुहारी अन्नपूर्णलाई फोन गरी धम्क्याएको मृतकका दाइ शेरबहादुरको दाबी रहेको छ।
एक्कासी बिहान फोन आएपछि ढुंगानालाई भेट्न परिवारका सदस्यहरु वीर अस्पताल पुगेका थिए। मृतकका परिवार र आफन्तका अनुसार ढुंगानाको अनुहारमा चोट र मुखबाट रगत बगेको देखिएको थियो।
ढुंगानालाई लिएर जाने सई सुरेन्द्र कार्की प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत छन्। कार्की र मृतक ढुंगानाकी श्रीमती बीच लेनदेन रहेकोमा कार्कीले ५ लाख दिनु पर्ने भन्दै चेक काटेर लगेका थिए। चेक बाउन्स भएपछि ढुंगानालाई कार्कीले घरबाटै उठाएका थिए।
परिवार श्रोतका अनुसार भने पैसा तिरिसक्दा पनि कार्कीले घम्क्याउने गरेका थिए।
प्रकाशित : बुधबार, कार्तिक २१, २०७५०९:१०
आज बिहानै भ्रमणबाट विद्यार्थी लिएर फर्किदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा २६ जना घाइते !
यो चौकीदारलाई सफल पार्नका लागि तपार्इंहरुले पनि साथ दिनुपर्दछः मुख्यमन्त्री भट्ट
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बारे प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगर पुगेर गरे यस्तो खुलासा
अण्डाको मुल्य घट्यो, कुखुरा पालकको भेलाले अण्डा नष्ट गर्ने तर बिक्री नगर्ने!
बर्थ डे मनाउन जाउँ भन्दै घरमा लगेर दुई किशोरी माथि बलात्कार ! ७ जनाले बलात्कार गरेको खुलासा !
सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब दिने संस्थालाई कारवाही हुने !
दिमाग छ भन्दैमा ज्यादा चलाउन त भएन नि ! यी तस्विर देखिएमा हाँस्दा-हाँस्दा आँशु आउनेछ !
माला लगाएर किरियापुत्री भेट्न पुगे मन्त्री पण्डित ! के हो रहस्य ?
१ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
श्रीलंकासँगको टि२० सिरिज पनि दक्षिण अफ्रिकाको क्लिन स्विप !
२६ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
४५ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका